Ciidamada oo la wareegay deegaanka Qaycad ee Gobolka Mudug | Dhacdo
Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya Daraawiishta Galmudug ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka Qaycad ee Gobolka Mudug, ka dib dagaalo culus oo maalmihii la soo dhaafay ay halkaasi kula galeen maleeshiyada Al Shabaab.
Deegaankan ayaa waxaa Talaadadii weerar dhinaca cirka ah ka gaystay diyaaradaha dagaalka Mareykanka, iyagoo markaasi taageeraya labada ciidan.
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa sheegtay in dagaalka khasaaro lagu gaarsiiyay maleeshiyada Al Shabaab.
“Kooxda Al Shabaab ayaa jab xoogan kala kulantay Ciidamada Huwanta ah ee qaranka iyo kuwa Galmudug, ayadoo maalintii darraad ahayd duqayn xoogan oo cirka ah ay ku sameeyeen Ciidamada Mareykanka.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug.
Warka ayaa lagu yiri “Kooxda Al Shabaab ee jabku ku dhacay ayaa maleeshiyaadkoodii ay bilaabeen in ay furimaha kala duwan isku soo dhiibaan, qaar kalena ayagoo firxad ah lagu arkay deegaamo badan, halka dhanka kalena ay Ciidamada Huwanta ahi ay magaalooyin iyo goobo istiraatiiji ah oo kale ay ku sii siqayaan.”